warkii.com » RASMI: Arsenal Oo Warbixin Caafimaad Ka Soo Saartay Shan Ciyaartoy Oo Kooxdeeda Xaalado Kala Duwan Kaga Maqan Iyo Murugada Mikel Arteta.
RASMI: Arsenal Oo Warbixin Caafimaad Ka Soo Saartay Shan Ciyaartoy Oo Kooxdeeda Xaalado Kala Duwan Kaga Maqan Iyo Murugada Mikel Arteta.
Kooxda Arsenal ayaa warbixin caafimaad ka soo saartay shan ciyaartoy oo kooxdeeda xaalado kala duwan kaga maqan waxayna warbixintani ka nixisay Mikel Arteta kaas oo waayi doona xidigo muhiim u ah kooxdiisa.
Warbixintan ay Arsenal soo saartay waxaa si rasmi ah loogu shaaciyay in difaaca saamaynta fiican hadda lahaa ee Shkodran Mustafi uu gabi ahaanba seegi doono kulamada kooxdiisa baaqiga u ah oo uu ku jiro finalka FA Cupka ee ay Chelsea la ciyaari doonaan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobnay warbixinaha caafimaad ee ay Arsenal ka soo saartay ciyaartoyda kooxdeeda dhaawacyada kala duwan kaga maqan halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
1- Bernd Leno: Waxa uu dhaawac seeda jilibka midig ahi ku soo gaadhay intii lagu jiray kulankii Brighton ee June 20, waxa uu hadda ka qayb galayaa orodka banaanka iyo kubbad ku shaqaynta. Waxa uu tababarka ku soo laabanayaa todobaadka soo socda”.
2- Shkodran Mustafi: Waxa uu dhaawac muruqa ahi ku soo gaadhay intii lagu jiray kulankii afar dhamaadka FA Cupka ee sabtidii. Waxa uu seegi doonaa kulamada baaqiga ah. Faah faahin dheeraad ah oo la xidhiidha barnaamijka soo kabsashadiisa ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalmaha soo socda”.
3- Calum Chambers: Waxa uu ka jabay seeda hoose ee jilibka bidix intii lagu jiray kulankii Chelsea ee December 29. Waxa uu horumar u sameeyay heerka labaad ee ka soo kabsashadiisa isaga oo hadda ordaya banaanka kubbadana ku shaqaynaya. Waxa uu sii wadi doonaa shaqada adag wuxuuna soo laaban doonaa sanadkan”.
4- Pablo Mari :Waxa soo gaadhay kala bax seeda canqowga ee lugtiisa bidix intii lagu jiray kulankii Manchester City ee June 17. Waxa uu hadda tuuray birihii uu ku boodayay kadib qaliin uu maray wuxuuna u socdaa si xor ah. Waxa uu ku laabtay Spain oo uu waqti kooban joogayo si uu khabiir ula kulmo, waxa uu UK ku soo laaban doonaa dhamaadka July”.
5- Gabriel Martinelli: Waxaa dhaawac jilibka bidix ah looga saaray intii lagu jiray tababarkii June 21. Waxa uu hadda ka soo kabsanayaa qaliinkii jilibka ee loo sameeyay kaas oo dhacay todobaadkii ugu danbeeyay June. Maalin kastaba waxa uu hadda joogaa xarunta tababarka waxa uu soo laaban doonaa dhamaadka sanadka”.
Mikel Arteta iyo kooxdiisa Arsenal ayaa isku diyaarinaya kulanka axada ee ay Watford ugu soo xidhan doonaan Premier League balse waxaa ugu muhiimsan oo ay isha ku hayaan kulanka finalka FA Cupka oo ay Chelsea kula ciyaari doonaan Wembley Stadium waana kulan ka caawin kara in ay Europa League ugu soo bixi karaan haddii ay Chelsea ka guulaystaan.